Archive du 29/05/2012
Niditra tamin�ny antso an-tariby mivantana teny amin�ny Magro Behoririka ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tolakandron�ny sabotsy 26 mey teo.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Hamoaka datim-pifidianana anio
Vaovao andrasan�ny rehetra amin�ity talata ity ny famoahan�ny CENIT ny tetiandron�ny fifidianana izay hotanterahana ato anatin�izao tetezamita izao.
Fahalalahana maneho hevitra ankalamanjana Hifanaza ny Vondron�ny mpanohitra, ny Prefektiora ary ny Filankevitra monisipaly
Tsy mifanipaka velively akory ireo mpanohitra fa ny lalana mankany amin�ny tanjona no samy manana ny azy, hoy Rtoa Lalatiana Ravololomanana.
Niditra an-tsehatra ny �Gros Bras�
Ny sabotsy 26 mey teo no nanatanteraka ny hetsika fahatelo hidirana teny amin�ny Kianjan�ny demokrasia Ambohijatovo ireo miara-dia amin�ny Free FM ka mitaky ny fahalalahana haneho hevitra sy manohitra ny tsy rariny sy ny tsy fahamarinana.
Manahy ny hisian�ny ady an-trano
Maneho ny ahiahiny ary milaza ho tena tsy tafandrimandry ireo Fivavahana mivondrona ato amin�ny HMF manoloana ny fijalian�ny vahoaka Malagasy, noho ny fahitana ny lalana izoran�ny firenena mankany amin�ny fahasimbana sy ny fahapotehan�izay kely sisa mbola ananana.
Praiminisitra Beriziky Jean Omer
�Ampio izahay hiala ao anatin�ny krizy�
Niaritra ny fotaka malama sy dia an-tongotra adiny iray niaraka tamin�ny rehetra, ny praiminisitra Beriziky Jean Omer sy ireo delegasiona niaraka taminy, raha nametraka ny vato fehizoron�ny fanamboarana tohodrano hahazoana herinaratra tao amin�ny Kaominina Ampasimbe Onibe ny sabotsy 26 mey teo.
Tsy maintsy akatona amin�ny taona 2015
Tsy maintsy akatona amin�ny taona 2015 Andralanitra ka afindra amin�ny toeran-kafa ny fanariam-pakon�Antananarivo.
Niharan-doza tany Moramanga
Niharan-doza ny tarika Firmin avy nanao fampisehoana nandritra ny roa andro tany Toamasina ka handeha hiantsehatra any Ambatondrazaka omaly alatsinain�ny Pentekosta.
Mikatona avokoa ny sekolim-panjakana
Misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin�ny samy SEMPAMA ao Toliara.
Lavalava ny andro tsy niasana nanomboka ny faran�ny herinandro lasa teo noho ny fetin�ny pentekosta, izay nataon�ny mpino kristianina maneran-tany hahatsiarovana ny nilatsahan�ny Fanahy Masina tamin�ireo mpianatr�i Jesoa Kristy.